Khulisa iBag, Khulisa intente, Khulisa iiKits zokukhanya - Virex
Intshayelelo yeMveliso Izinto eziPhambili: I-VIREX ikhulisa iimpawu zentente ze-600D i-canvas enzima, i-mylar lining ebonakalisa kakhulu kunye nesakhelo sesinyithi esomeleleyo; Ibubungqina bamanzi, i-light-proof, kwaye ixhotyiswe kwangaphambili ukwenzela ukutsalwa kunye nokuphefumla; iyenza igqibelele nakuphi na ukukhula okuqhelekileyo. Ulwakhiwo olomeleleyo: Isakhelo sesinyithi senziwe ngamatyhubhu amelana nomhlwa kunye neekona zokutyhala; Akukho zixhobo ezifunekayo zokuhlanganisa. Ubukhulu bokuthintela ukukhanya:I-mylar coating ibonakalisa kakhulu, iyahlambeka, kwaye ayinayo ityhefu; iyavala...
Intshayelelo yeMveliso I-Virex Khulisa intente ngumthunzi ogqibeleleyo, usebenzisa i-mylar ebonakalayo ebonisa amanzi kakhulu ukuphucula ukusebenza kakuhle kwemveliso yayo nayiphi na intente yokukhula. Iseyile yePrimiyamu eyi-600D ayixhathisi ukukrazuka kwaye ukuqhekeka kabini kuthintela konke ukukhanya ekubalekeni; I-canvas iqiniswa ngeentonga zetsimbi ukuqinisekisa ukhuseleko kunye nokuzinza. Iiziphu ezikumgangatho ophezulu zinokukhusela intente ekuvuzeni ukukhanya, iqinisekisa ukuqina kunye nokusetyenziswa okuhlala ixesha elide. Sihamba kude kakhulu ukuqinisekisa ukuba iiziphu zethu zentsimbi enzima ...
Intshayelelo yeMveliso Ubuchwephesha obungalinganiyo kunye nemathiriyeli yenza iintente ze-hydroponic mylar zibe lolona khetho lulungileyo kubo bobabini abalimi abaqeqeshiweyo nabangabasafundanga. Iivents ezininzi: iivents ezijikelezayo, umtya olungelelanisiweyo, kulula ukuyisebenzisa. Kukwakho iiWindows ezincinci ezimhlophe ezinemesh kunye neteyiphu yomlingo yokuvula nokuvala lula. Iivents ezininzi ziyakwenza ukuba kube lula ukuseta izixhobo ezahlukeneyo zokungenisa umoya kunye nokungenisa umoya okungcono kunye nefenisha ene-multi-vent kunye nemveliso yokucoca iReflective :95% ephezulu ebonakalisa ifilimu yepolyester ...
Intshayelelo yeMveliso I-VIREX intente yokukhula ibhloka konke ukuphunyuka kokukhanya kwaye ifakwe kwi-mylar ekhanyayo ukuphucula ukusebenza kakuhle kwemveliso yayo nayiphi na intente yokukhula; I-Zipper ene-black lining yenza isitywina esikhanyayo esingadingi iiflaps ezongezelelweyo kunye ne-self-adhesive tape. Ubunzima obukhulu, bomelele: umthungo ophindwe kabini ukuthintela ukukhanya; Ifakwe kwizinto ezingenayo ityhefu ye-PE, ikhuselekile kumzi-mveliso wakho, intente ixhaswa ngokukodwa ngezibonda zetsimbi ezomeleleyo zofakelo olugudileyo. Ukuseta ngokukhawuleza :VIVO...
Intshayelelo yeMveliso Ufakelo olukhawulezayo lwesixhobo: Intente yethu yokutyala i-40 * 40 * 120cm kulula ukuyifaka, nokuba awuzange wenze into efana nayo: akukho zixhobo ezifunekayo; Ubuchwephesha obungenakulinganiswa kunye nezixhobo zenza iintente ze-hydroponic mylar zibe lolona khetho lufanelekileyo kubo bobabini abalimi abaqeqeshiweyo kunye nabalimi be-Amateur Ii-vents ezininzi: ii-vents ezijikelezayo, i-drawstring ehlengahlengiswayo, kulula ukuyisebenzisa. Kukwakho iiWindows ezincinci ezimhlophe ezinemesh kunye neteyiphu yomlingo yokuvula nokuvala lula. Iivents ezininzi ziya kwenza kube lula ukuse...
Intshayelelo yeMveliso I-VIREX yokuKhula iTente yenziwe kwi-600D Oxford kwaye ifakwe ngesilivere ye-PET mylar enezinga elibonakalisayo elingaphezulu kwe-95%. Impahla yentente enzima, intsimbi emhlophe egqunywe ngentsimbi, umsebenzi omnyama onzima we-ABS odibeneyo, ukhuselekile kwaye uzinzile. Uyilo locango olumilise ngo-D, iziphu yerabha ephindwe kabini eyomeleleyo. Iifestile ezininzi ezingamawele zingasetyenziselwa ukuhlalisa izihluzi kunye neefeni. Izihluzi ezimhlophe zenzelwe ukunceda ukujikeleza umoya kunye nokugcina ezinye izidalwa ngaphandle kwentente ekhulayo. I-VIREX yokutyala izixhobo zentente ibandakanya...
I-Spectrum egcweleyo ye-LED yokukhanya okuPhakamileyo Intell...
Intshayelelo yeMveliso Izibane zokuKhula kwe-VIREX ze-LED zandisa isivuno sesityalo kunye nokonga amandla ngokukhanya okuphezulu kunye nokubola okuncinci, okukunceda ukuba ufikelele umgangatho ophezulu kunye nobuninzi. Ukukhanya okuguquguqukayo kokukhula kunye ne-spectrum epheleleyo, ukukhanya kokukhanya kunokulungelelaniswa ngokukhululekileyo kwizigaba ezahlukeneyo ngokweemfuno zokukhula kwezityalo, isibane esiphambili silula ukulawula, sifanelekile kwintengiso kunye negadi yasekhaya. Ibhodi yokukhanya itywiniwe ukuze ungabi naxhala malunga neemeko zokukhula ezimanzi af...
16/19/24 Intshi yesitya seLeaf Bud Trimmer Factory Sup...
Isekwe kwi-2013, i-Huizhou Virex Technology Co., Ltd. igxile kwintsimi yegadi yangaphakathi kunye nezixhobo ze-hydroponics. Eyeyona ikhokela umthengisi wangaphandle waseTshayina kunye nomthengisi wegolide oqinisekisiweyo kwi-alibaba, iimveliso zethu eziphambili kukukhulisa intente, i-leaf trimmer, i-LED ukukhula, ibhegi yokukhulisa. Khulisa ikiti yokukhanya kunye nangaphezulu-yonke into oyifunayo ukwakha igadi epheleleyo kunye neemveliso ze-hydroponic.
Intshayelelo yeMveliso I-VIREX ikhulisa uyilo lwentente ibonelela ngokukhula okubonakalayo kokukhanya kunye nokuhanjiswa kokukhanya, ukubonakalisa okuphezulu, ukuze izityalo zakho zifune ukukhanya okungakumbi. Yenziwe nge-600D canvas, ayixhathisi ukukrazuka, ukumelana nokukhanya ngakumbi, yomelele ngakumbi, ikhuselekile, kwaye yenze eyona ndawo ilungileyo yokukhula kwakho kunye nezityalo zakho. Umnyango mkhulu ngokwaneleyo ukuba ungene kwaye uhambise izityalo; Ifestile yokujonga, ukukroba okufanelekileyo; Iivents ezininzi ezijikelezayo, ezifanelekileyo kwiisayizi ezahlukeneyo zeefilitha zefeni; Detachabl...
Intshayelelo yeMveliso I-VIREX ehlala ixesha elide ikhule intente: i-adaptha ye-Angle yensimbi ezinzileyo kunye nepali yinkxaso ethembekileyo yentente, ime ngokuqinileyo, i-rust free, ipeyinti ekhululekile, ukufakwa ngokukhawuleza nokulula ngaphandle kwezixhobo. I-zipper yentsimbi enzima ye-Virex, ene-lining emnyama ephindwe kabini, yeyona nto ilungileyo kwimarike yokudala itywina eliqinileyo. itreyi esuswayo igcina imigangatho icocekile: Ipakethi ibandakanya itreyi yomgangatho esuswayo engangeni manzi ukubamba umhlaba kunye nenkunkuma yamagqabi. Itreyi iyasuswa, ayinamanzi kwaye iyasuswa...
1/8” iRope Ratchet Hanger Umgangatho oPhezulu A P...
Intshayelelo yeMveliso 1/8 “ihenga yentambo enzima. Ubuninzi bomthwalo : 150 LB / isibini, 68 kg / isibini. Izinto eziphathekayo: inayiloni, ingxubevange ye-zinc, intsimbi engenasici. Iratchet nganye inomthwalo wokulayisha ukuya kuthi ga kwi-150LB; Ubude bentambo -8 iinyawo. I-4 kulula ukuyisebenzisa iikliphu ze-carabiner Eyomeleleyo, ikrazuka kunye nomhlwa, i-hanger ye-pulley ratchet eneenjongo ezininzi Ukutshixa okuhambelanayo ngokupheleleyo; Ukumelana nokukrazula, ukuxhathisa umhlwa; Ukusetyenziswa kweenjongo ezininzi. Ukuba imveliso ifuna ukulungiswa phantsi, intonga yokulawula indawo kwi-pulley kufuneka itsalwe ...
Ukufudumeza okuhlala ixesha elide iMat 48 * 20.75 Intshi yePVC M...
Intshayelelo yeMveliso Iipads zobushushu zobuchwephesha zeVIREX zigcina ubushushu bukwiqondo eliphezulu le-10-20 ° F ngaphezu kobushushu bomoya obukhoyo, obulungele ukuqaliswa kwezithole kunye nokusasazwa kokusikwa Okuhlala ixesha elide: Kuthambile, kuyaguquguquka, kuhlala ixesha elide, unxibelelwano olomeleziweyo phakathi kwemethi kunye nentambo yombane, ingenamanzi, yenza ikhuseleke. Khuhla ucoceke uzinze, nkqu nobushushu, uqinisekise ukuba le mat yomelele ayizi kutshisa iingcambu zezityalo. Umhlobo osenyongweni wezityalo: Igqibelele ukuqalisa izithole entwasahlobo, ebusika, okanye nanini na izityalo zakho zifuna...
20*20.75 I-intshi yeSeeding Heat Mat Inceda iimbewu kwiNtsholongwane...
ISeeding Heating Mat 10*20.75 Intshi ye IP 67 Ukungangeni manzi
Intshayelelo yeMveliso I-VIREX's iimathi zobushushu obuchwephesha ze-VIREX zigcina ubushushu bukwiqondo eliphezulu le-10-20 ° F ngaphezu kobushushu bomoya obukhoyo, bulungele izithole kunye nokusasazwa kwe-cuttage Ihlala ixesha elide: ithambile, ibhetyebhetye kwaye ihlala ixesha elide, ichanekile, unxibelelwano olomeleziweyo phakathi komqamelo kunye nentambo yombane, ingenamanzi, ivumela. Sula ngokukhuselekileyo ukucoca ngasentshona Ukuzinza nobushushu: I-alloy eyomeleziweyo ye-Virex ye-Niki Rotal yokufudumeza ucingo kunye nefilimu ye-PET ekhuselayo eyongezelelweyo iqinisekisa ukuba le mat yomelele ayiyi kutshisa iingcambu zakho ...
90CM *6 Iileyiti ezomileyo zoMnatha zinokususwa ngeHanger Ou...
Intshayelelo yeMveliso Izinto zokukhuselwa kokusingqongileyo: imathiriyeli yelaphu elingenawo ityhefu engenamanzi, intsimbi eyakhelwe-ngaphakathi ngentsimbi, inkxaso eqinileyo. Uyilo olusongekayo: i-mesh eyomileyo ivuleke ngokupheleleyo, umthamo omkhulu. Iyasonga ibe yipakethe encinci yokugcina lula. Umnatha ophefumlayo: umnatha ophefumlayo ujikeleza umoya kwaye womise izixhobo ngokukhawuleza. Uyilo lwerakhi eyomileyo, ekulungele ngakumbi ukugcina iimpahla. Uyilo olukhethekileyo lwenza kube lula ukuyifaka okanye ukukhupha into ofuna ukuyomisa, kwaye iphinde ithintele umoya ekuvuthuzeni ...
Khulisa iikhithi zokuKhanya Gqibezela iHydroponics Greenhouse...
Intshayelelo yeMveliso I-VIREX ikhule iikhithi zokukhanya zinokukhanya okugcweleyo okubonakalayo okufanelekileyo kuzo zonke izigaba zokukhula; Ukutshintsha ukukhanya okulungelelanisiweyo ukulungisa ukukhanya kokukhanya; Iingubo ezikhuselayo kwii-leds zinceda ukwandisa ubomi benkonzo; Akukho fan, akukho ngxolo. Oku kukhanya kunika ukukhanya okunamandla kunye nokungena okufanayo kwe-canopy, okukhokelela kwisivuno esiphezulu. Intente yokutyala emabhodloka: Ingaphakathi le-mylar elibonakalayo liyandisa indima yesibane sokutyala; Umsebenzi onzima we600D Oxford ujonge ukonyuka kokuqina; Iziphu ethembekileyo ivala ngokutyibilikayo...
Ukuphepha amaqondo okushisa aphezulu ngumngeni ojongene nabalimi abaninzi bangaphakathi, nangona ingxaki inokujongwa ngeendlela ezahlukeneyo. Nazi ezinye zezona ndlela zisebenzayo onokuthi ugcine ubushushu obugqibeleleyo kwintente yakho ekhulayo yokukhula kwezityalo. Ikharbhon dayoksayidi Njengoko ivakala ngokulula, ukusebenzisa ikharbon diokside kunokuba ...
Nazi izibane ozidingayo ukuze ufumane izityalo ezisemgangathweni ngexesha elifutshane kakhulu: Isibane sokukhula okukhokelayo Zilula kakhulu ukuseta kwaye ezincinci ziplagi kwaye zidlale. Emva kokuzincamathela eludongeni, ungazixhoma phezu kwezityalo. Ukuba ufuna ukuseta olulula ukwandisa isivuno sakho sesityalo, kufuneka usithenge. Nangona zibaleka kancinci ubushushu, uya ...